Izixhobo ezenziwe ngabantu - i-Ikkaro
yokuqalisa >> Izixhobo ezenziwe ekhaya
Izixhobo ezenziwe ekhaya
Vula icandelo elibiziweyo Izixhobo ezenziwe ngabantu Kube sisigqibo esinzima. Asiyomfazwe asitsaleleki kugonyamelo kodwa emva kokuphonononga amanqaku e-Ikkaro siye saqonda ukuba kule minyaka sisebenze ngolwazi oluninzi malunga nezaphetha ezenziwe ekhaya, oololiwe kunye nezixhobo zeofisi. Ayizizo izixhobo zokusebenzisa, ingezompu okanye imipu engaphantsi, kodwa zikhona xa uzihlela, nokuba kuyasenzakalisa
Asifuni mntu enze isixhobo sokwenza ububi, kodwa sichithe ixesha elithile nabahlobo, njengomntu odlala iidarts, kuba badubula ngesaphetha okanye ngepensile. Uninzi lwezinto ezikweli candelo zenza izixhobo ezinokuthi zithathelwe ingqalelo njengezinto zokudlala, izixhobo zokuvula ingqekembe, iziqwengana zemipu okanye imipu ye-gauss eneemagnethi zomntwana. Iinqwenela ezilula.
Ke ngoko, sukujonga kweli candelo ngayo nayiphi na into engeyiyo into elula oyithandayo okanye egqitha ngaphaya komnqweno wokufuna ukubona isebenza njani indlela ethile. Ngubani ongazange adlale nombulali wenamba? Okanye ngaba kwenziwe isaphetha ngentonga nangomtya? Okanye umpu wokuphosa iibhola zamaphepha eklasini? Madoda, ezi zixhobo, izixhobo ezenziwe ekhaya, masilibale malunga nentsingiselo embi yamagama.
Andikholelwa ukuba olu lwazi lukhuthaza nabani na ukuba enze isixhobo kwaye asisebenzise ngolunya njengoko phantse nayiphi na into inokusetyenziselwa ukwenzakalisa. Kodwa ukuba ufumana inqaku ocinga ukuba alikho ndawo, nceda unxibelelane nathi kwaye singakuvuyela ukuphinda silihlole.
Uliqhuba njani ivili lebhayisekile
Sobona Uyenza njani iarch kunye nongqameko lwevili lebhayisikile. Ngokomgaqo ayizukuba sisaphetha esinamandla kakhulu, kodwa kufuneka ubenakho ukuyisebenzisa kumgama omalunga neemitha ezingama-20, kwaye ube nakho ukonwaba kwithagethi.
Njengomntwana mna Ndenze izaphetha ezininzi, kunye nazo zonke iintlobo zamasebe, imithi kunye neeplastiki. Sebenzisa iintambo, iityhubhu zebhayisekile, njl. Kwaye ndinevili elidala endisele ndiyazi ngalo ukuba lenza ntoni.
Uyenza njani i-Trebuchet catapult yasekhaya
Ngokuqinisekileyo uyathanda ikhathalogu, wonke umntu uyazithanda :) Kwaye ukuba sinokubenza babe bakhulu, babengcono kuncono.
Oku ukubona emfanekisweni yi catapult trebuchet. Kukho amakhulu iindlela zokwenza le catapult. Ukusuka kwiimodeli ezinkulu, njengesixhobo esidala sokuhlaselwa kwenqaba ukuya kwiimodeli ezincinci kunye nezenziweyo
Uyenza njani i-crystal arrowhead
Ithiyori ilula kakhulu, nangona ndicinga ukuba ukuziqhelanisa kuya kuba nzima.
Obu buchule busikhumbuza indlela krola amatye ukuze ufumane iintloko ngaphambili. Kwaye iyafana kakhulu nomfanekiso osibonisayo I-obsidian arrow intloko ebizwa ngokuba yiglasi ye-volcanic
Thatha ithuba ngee curve ezantsi kweebhotile zeglasi ngobume be intloko yotolo. Akunyanzelekanga ukuba ukhethe iibhotile ezineziseko ezingezizo ezomeleleyo, okanye ezixineneyo.
Uyenza njani intambo ngemicu yemifuno
Ndiyithandile le vidiyo apho bachaza indlela yokwenza intambo ngemicu yemifuno. Ayisiyo ... Qhubeka nokufunda
Uyenza njani isamba esenziwe ekhaya kwilade endala yesarha.
Njengoko ubona, kuyindlela elula yokufumana i-cimela eyenziwe ekhaya.
Xa sinayo isetyhula blade blade ukulahla, sinokuphinda sisebenzise kwakhona ukuze sifumane iimela ezimbalwa zobukhulu obahlukeneyo.
Ukwenza iintolo zoqalo
Ngexesha elidlulileyo sibonile indlela yokwenza isaphetha kwaye sinezinye zeemodeli ezijongwa kakhulu zokubhala izithuba.
Kodwa isaphetha asikho iintolo. Kule mihla zihlala zenziwe ngeentambo zekhabhoni, kodwa apha sifuna ukukubonisa indlela yokwenza iintolo zemveli ngeepali zoqalo.
Uyenza njani umpu ovula iibhola zeping pong
Sele silubonile uhlobo lwe umpu uvula iibhola zepingpong. Kodwa namhlanje yifomathi yompu ngakumbi, ejhehe
Umfanekiso uyenza icace gca ukuba yakhiwe njani, ke andizukugxininisa ngakumbi. Shiya nje umfanekiso kunye nemilinganiselo ukulungiselela umsebenzi wakho.
Kule nqaku siza kuthetha ngokudala izixhobo zeofisi u Izixhobo zeOfisi. Izixhobo ezinokwenziwa ngezinto ze-ofisi eziqhelekileyo, iiklip zephepha, iirabha, iipensile, izinto zokuloba iipensile, njl. Yiphathe ngononophelo olukhulu.
Isilumkiso: Njengazo zonke izixhobo zeofisi, inokuba yingozi kakhulu kwaye ibangele nomonakalo. Sebenzisa ngononophelo.
Catapult kunye umboniso
Siqala ngecandelo le- Izixhobo zeOfisi o izixhobo zeofisi.
Kule meko sibonisa Uyenza njani ikati kunye neebhendi zerabha.
Lo ikati elula Yenziwe ngamacandelo amabini. Kwelinye icala inkxaso kunye nakwelinye icala i-counterweight, eya kuthi yenziwe ibhendi ye-elastic
Masibone ulwakhiwo lwenkxaso kwimifanekiso emibini elula
Uyenza njani ipensile enqamlezileyo
Sishiya le modeli inomdla ukwakha i I-crossbow yeofisi kunye neepensile, usiba kunye neebhendi zerabha ezisixhenxe.
Yenye into eyenziweyo ehlelwe njenge izixhobo zeofisi.
Islingling yodidi kunye nokubona kwelaser
Umcimbi we ukudibanisa i-laser kwislingling ukujolisa Ayisiyongcamango intsha, kulula ukuyifumana kwiiwebhusayithi ezikweli lizwe apho ukuthenga isixhobo kulula njengokuthatha itoti yesoda kumatshini.
Okuboniswe kweli nqaku yindlela yokuziqhelanisa neslingling yesiqhelo, ngezinto eziqhelekileyo.
Ukuba uthanda islingshots, ndincoma ukuba ubukele le tIngcali yaseIraq, ezisetyenziswa zombini kukhuphiswano nasekuzingeleni. Ngokuqinisekileyo uyawa eluthandweni